Haye Twitter, Waxaan isku dayay Xayeysiis waana kan waxa dhacay | Martech Zone
Waxaan aqriyay faallooyin isku dhafan oo ku saabsan Xayeysiinta Twitter. Aniga oo aan isticmaalin naftayda, waxaan u maleynayay inay mudan tahay in la siiyo tallaal. Waxaan jeclaan lahaa inaan soo jiito dad badan oo ka mid ah xisaabaadka Tiknoolajiyadda Suuqgeynta Twitter waxaanan doonayay inaan arko bal in xayeysiisyada qaarkood ay wax ka tari doonaan Waxaan u maleynayaa inaanan helin si aan u ogaado.
Haye @TwitterAds, waxaan isku dayay inaan lacag kula qaato laakiin waad ii ogolaan weyday
Waxaan si taxaddar leh ugu dhex wareegay xulashooyinka shaandhaynta si aan u yareeyo dhagaystayaasha. Waxaan u xushay Suuq geyn qayb ahaan, waxaan ka soo saaray ereyada muhiimka ah qeybaheena si aan u bartilmaameedsano, xitaa waxaan siiyay dhowr darsin akoonno isticmaaleyaal kale si ay isugu dayaan inay u soo jiitaan kuwa raacsan sidoo kale.
Markii aan dhammaystiray bartilmaameedka, waxaa la ii soo bandhigay fursad aan ku xusho mid ka mid ah Tweets-kayga, ama aan ku dhiso mid aan leeyahay. Waxaan doortay inaan sameysto tiisa. Mar labaad… Waqti aad u badan ayaan ku qaatay farsamaynta farriinta si aan u tijaabiyo iyo muuqaal fiican.
Ka dibna waxaan isku dayay inaan daabaco Kaarka Twitter… ogow khaladka:
Dhib malahan, waxaan is iri naftayda. Waxaan arkay inay jirto badhan badbaadin ah oo ku badbaadin kara ololahaaga midigta kore. Marka, waxaan guji keydka oo… ogaadaa qaladka:
Gabi ahaanba wax fikrad ah kama haysto waxa hadda la sameeyo. Ma badbaadin karo dhammaan shaqadii aan qabtay ee ku aaddanaa ololaha mana badbaadin karo dhammaan shaqadii aan ka qabtay hal-abuurka.
Tags: Twitterxayeysiiska twitter-ka ayaa guuldareystayxayeysiiska twitterxayeysiinta twitterhal-abuurka twitter-ka ayaa ku fashilmaytwitter guuldareysto
Amanda Webb (@AbdihakimAinte)
Kaligaa ma tihid! Anigu waxaan socodsiiyaa xayeysiisyada Twitter, mararka qaarkood naftayda, inta badan macaamiisha waana runti, runtii waa buggy. Waxaa laygu ogaa inaan cadho iskaga socdo waqtiba waqti kadib. Runtii waxay u baahan yihiin inay tan hagaajiyaan haddii ay lacag helayaan.